Maarso | 2011 | WEEJIDOW
Archive for Maarso, 2011
Xaalada Luuq Oo Saaka Degan Ka Dib Dagaal Xaley Ka Dhacay
Maarso 31, 2011
Waxaa maanta degan xaaladda degmada Luuq ee gobalka Galgaduud ka dib dagaal ka dhacay halkaas.
Ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ku yaala gudaha degmada Luuq, waxaana xalay halkaas ka dhacay dagaal la’isaga hor jeeday.
Xaaladda degmada Luuq waxaa saaka ay tahay mid degan, waxaana dadku ay ku waabariisteen jawi degan.
Lama xaqiijin qasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada Luuq ee gobalka Gedo.
Maalmihii u dambeeyay ayaa dagaalo waxaa ay ka taagnaayeen xiisado colaado gudaha gobalka Gedo, waxaana qasaaro fara badan ka soo gaaray dagaaladaas dadka shacabka.
Ciidamada Dowlada Oo Howlgal Ka Wada Magaalada Mogdisho.
Ciidamo fara badan oo isugu jira Booliiska iyo Militeriga ayaa waxaa maanta lagu arkayey iyaga oo Howlgalo baaritaano ah ka bilaabeen qeybo badan oo ka mid ah Magaalada Muqdisho.
Goobaha Howlgalada baaritaanada ay ka socdaan ayaa waxaa ka mid ah Wadada Sayidka,Degmada Xamaeweyne,Xamar Jajab iyo Degmada Waaberi ee Gobalka Banaadir iyadoona Ciidamada Shakhsi shakhsi u baaraya dadka iyo Gaadiidkaba.
Howlgalka Saaka meelo badan oo ka mid ah Muqdisho Saaka ka socda ayaa waxaa uu u muuqdaa mid qorsheysan,waxaana sidoo kale dadka Gawaarida saaran qaarkooda la weydiinayo halka ay ka yimaadeen iyo Shaqadooda waxaa ay tahay.
Talaabadani Ciidamada ay qaadeen ayaan la ogeen hadii ay howlgalkooda dad ay kusoo qabteen iyo in kale maadaamaa wali Howlgalada ay socdaan islarkaana si aad ah loo baarayo Gawaarida.
Lafoole Oo Dhalanyaro Ku Xirtey Shabaab
Wararka ka imaanaya deegaanka Lafoole ee Gobalka Sh/hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in 24-saac ee lasoo dhaafey Ciidamo ka tirsan Shabaab howlgal ay ka sameeyeen waxaa ay kusoo qabteen dad fara badan.
Sida dadka deeganka Lafoole ay ku waramayaan waxaa Ciidamada Howlgalkooda ay kusoo qabteen in ka badab 11-Ruux oo dhalinyaro u badan kuwaaso oo lagu eedayey in ay jabiyaan Amaro ay kusoo rugeen Maamulka Shabaab ee Deegaankaasi.
Waxaana Dhalintaas howlgalka lagu soo qabtey loo taxaabey Xabsi kuyaala Gudaha Deegaankaasi hase ahaatee si dhab ah looma cadeyn karo wax yaabha lagu eedeynayo oo ku aadan in ay amaro jabiyeen.
Saaraakiil Shabaab ka tirsan oo Saxaafada la Hadley ayaa waxaa ay sheegeen in ragan lasoo taagi doono Maxkamad islamarkaana lawaafajin doono Shareecada Islaamka lama carbaabin xiliga lamaxkamadeynayo.
Ciidamada Canada Oo Wiil Soomaali Ah Xirey
Ciidamada Illaalada garoomada diyaaradaha wadanka Canada ayaa sheegay inay qabteen muwaadin Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay Xarakadda Mujaahidiinta Al-Shabab xilli la sheegay inuu doonayay inuu Soomaaliya usoo safro kuna biiro dagaalyahanda Al-Shabab oo Soomaaliya ka dagaalama.
War ciidamada Booliska soo saareen ayaa lagu sheegay in muwaadinkaan oo aan willi magaciisa la shaacin ayaa waxaa laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaaladda Toronto waxaa Booliisku sheegeen in ninkaan uu doonayay inuu uu soo safro wadanka Soomaaliya si uu ugamid noqdo dagaalyahanada u dagaalama Xarakadda Al-Shabab waxaana Boolisku sheegay inay haatan su’aalo safarkiisa la xiriira waydiinayaan.
Hay’adda amniga qaranka dalka Canada ayaa sheegtay inay xog ku heeshay in muwaadinkaan Soomaaliyeed uu dhawr jeer xiriiro la sameeyay hogaanka dhaq dhaqaaqa Al-Shabab ee la dagaalansan ciidamada dawlada Soomaaliya iyo kuwa midawga Africa ee AMISOM isla markaana lagu qanciyay inuu Soomaaliya yimaado kadibna ka garab dagaalamo Al-Shabab.
Ciidamada illaaliya garoonka diyaaradaha ayaa sheegay inay maxkamad u gudbin doonaan muwaadinkaan kadibna lagu qaado dacwado argagixisinimo la xiriira.
Tiro badan oo dhalinyaro Soomaali ah ayaa la sheegay inay wadamada dunida kasoo tageen ay Soomaaliya yimaadeen kadibna ka dagaalameen iyagoo la safan Xarakadda Mujaahidiinta Al-Shabab.
Mareykanka Oo Sheegey In Ay Diyaar U Aheyn In Burcadbadeeda Dhulka Kula Dagaalami Doonon
Dawlada Maraykanka ayaa sheegtay inaysan diyaar u aheyn in dhulka kula dagaalankato kooxaha burcad badeeda Soomaaliyeed ee wax ka fduubta biyaha Soomaaliya.
Kaaliyaha xog’hayaha arrimaha siyaasadda iyo Military,ga ee Maraykan Andrew Shapiro ayaa sheegay in dawladiisu aysan qorshaha ugu jirin inay ciidamo dhulka kula dagaalama burcad badeeda u dirto Soomaaliya hase ahaatee ay burcad badeeda kula dagaalami doonaan dhanka badda oo kaliya sida uu sheegay.
Sarkaalkaan dawlada Maraykanka u hadlay ayaa sheegay inay diyaariyeen qorshe wax looga qabanayo burcad badeeda Soomaaliyeed ee gaadiid badeedka ka afduubta biyaha Soomaaliya,waxaana uu intaa ku daray Andrew Shapiro inaysan qorshaha ugu jirin inay dhinaca bariga burcad badeeda kula dagaalamaan.
Andrew Shapiro waxaa uu xusay in xukuumadda Washington ay diyaar u tahay inay la shaqeyso m/mulada gobolada Soomaaliya ka jira si ay dhinacooda burcad badeeda ula dagaalamaan taasoo uu ku sheegay inay wax badan ka qabto dhibaatada burcad badeedu caalamka ku hayso sida uu hadalka u dhigay.
“Nooma qorsheysna inaan barriga Soomaalia u dagano oo aanu burcad badeeda kula dagaalano ama xattaa aan saldhigyo ka sameysano”ayuu yiri kaaliyaha xog’haya arrimaha siyaasadda iyo Militaryga Maraykanka Andrew Shapiro oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Maraykanka.
Sidoo kale Shapiro waxa auu sheegay inay tageero siinayaan wadamada maxkamadeeya burcad badeeda Soomaalida marka la qabto si gaar ah wadamada ku yaala gobolka geeska Africa.
Maraykanka ayaa waxaa xeebaha Soomaaliya waxaa ka jooga maraakiib dagaal oo la sheegay inay la dagaalamayaan burcad badeeda Soomaalida hase ahaatee kooxaha burcad badeeda Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay haatan haystaan illaa iyo 26 markab iyo 600 oo shaqaale ah kuwaasoo ay ka doonayaan lacago madax furasho ah.
Maxamed Cumar Xabeeb Oo Xarriggiisa Ku Eedeeyay Madaxweyne Shariif iyo Kuwo Kale.
Guddoomiyihii hore ee Maamulka Gobolka banaadir ahaana Duqii magaalada Muqdisho oo Maanta gelinkii danbe Idaacadda BBCda la hadlay ayaa ka war bixiyay sababaha keeney in la xiro.
Maxamed Dheere ayaa sheegey in ay jirto Siyaasad uu ku macneeyay Maamul Goboleed qorshihiisa la waday oo ay maamul ku samaysanayeen Gobolada Shabeelaha Hoose Banaadir iyo Shabeelaha dhexe sidaa darteedna uu Madaxweyne Shariif ku filaan weyday Jagada uu iminka hayo ee madaxweyninimada waa siduu hadalka u dhigaye.
Guddoomihii hore ee gobolka banaadir ayaa ugu yeeray madaxweynaha haddii uu ka dhamaan waayo xukunkaas Localka ah inuu isaga dego Kursiga uu iminka ku fadhiyo loolana uu u galo Maamul Goboleedka uu sheegey.
Guddoomiyihii hore ayaa sheegey in Xariggiisa ay ka danbeyen Madaxweynaha Wasiirka arrimaha Gudaha iyo Duqa magaalada Muqdisho isagoona sheegey sababta loo xiray in ay ahayd mu’aamarad ay raggaas u sameeyeen balse ay ku gaari waayeen ujeedadii ay ka lahaayeen xarigooda.
Maxamed Cumar Xabeeb ayaa u digay Ra’iisul wasaraaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiirka gaashaan dhigga isagoona uga digay in ay ka digtoonadaan in ay ku ajarman siyaasadda la isku hayo ee ka dhaxaysa isaga iyo Ragga uu eedeynayo isagoona u soo jeediyay inay arrintaa isaga fogaadaan oo ayan marnaba ku lug yeelan waa siduu hadalka u dhigaye.
Mar wax laga weeydiiyay Maxamed Dheere sababta mar walba loo xiro ayuu soo qaatay in isagu marnaba uusan qaldanayn xariggiisii horena wax lagu waayay kan haatana wax lagu caddeeyo la waayay sidaa darteedna wuxuu hadalkiisa ku gaba gabeeyay “Wax waalan ayaa Wax nagala dhaxeeyaan
Hadalkan guddoomiyihii hore ee gobolka banadir ayaa imaanaya xilli dhawaan xabsiga laga soo daayay kaasoo maalmahn danbaba waday Ol olayaal uu kula hadlayay taageerayaashiisa si uu ugu muujiyo in sababihii loo xiray ay ahaayeen qalad laga galay.
Hagardaamo Mahaatiri Iyo Foojignaan Darada DigilMirifle “Deyo DigilMiriflow” Q-29aad
Maarso 29, 2011
Sheekh Maxamed Macalim Xasan waxa uu ku geeriyoodey dalka Teliyaaniga, magaalada Torino, Bishii Ogosto 13-keedii sanadkii 2000, ALLAAH ka sokow waxaa suuro geliyey in lagu duugo Soomaaliya, ardadiisii iyo dad kale oo is abaabuley, soo dhaweynta meydka waxaa ka qeyb galey kumanaan kun oo ruux oo isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana meydka looga hor tagey garoonka diyaaradaha ee Beled-Doogle ee magaalada Muqdisho u jira ‘100 km’.
Gawaari aad u fara badan ayaa ka qeyb qaatey soo galbinta meydka Sheekh Maxamed Macalim Xasan oo xanuunsanaa mudo sanad iyo bar ah, ka dib markii uu shil ku galey magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga sanadkii 1999-ki.
Magaalada Muqdisho markii la soo gaarsiiyey ayaa waxaa la soo marsiiyey meydkiisa asagoo lagu wado naxash aad u qurux badan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho bartamaheeda, sida wadada loo yaqaan wadnaha, waxaa laga wareejiyey wadada loo yaqaan Folorensa “Florence”, iyadoo halkaa lagala leexdey hadana wadada caanka ah ee sodonka ilaa dhinaca fagax, waxaana la abaarey dhinaca deegaanka suuqa xoolaha.
Dad aan isa soo abaabulin oo idaacadaha magaaladuna ay ku war geliyeen qaabka aaska Sheekhu u dhici doono ayaa taagnaa wadooyinkii la mariyey meydka Sheekh Maxamed Macalim Xasan Allaah ha u naxariistee, waxeyna ay kor u taagayeen gacmaha ayagoo ALLAAH u baryayey in uu janadiisa Fardowsa aheyd ka waraabiyo.
Dadku waxa ay isa safeen hareeraha wadooyinka waxaana u badnaa haween iyo caruur iyo dad waayeel ah oo uga soo baxey guryahoodii ay ku jireen, waxaa dadku ay ka muuqatey naxdin geerida Shiikhu ku timid awgeed, waxaana ay si aad ah u soo raaceen galbinta meydka Sheekh Maxamed Macalim Xasan ayadoo ay gawaaridu aad u fara badneyd, ayna ku jireen kuwa qaada xamuulka oo dad badan soo qaadey.
Guddi gaar ah oo qaban qaabiya hawsha aaska Sheekha ayaa waxaa iska dhex doortey culimada magaalada Muqdisho, gudigaas waxa uu gacan weyn ka geystey aaska Shiikha, waxaana uu u mahad celiyey dhamaan intii gacanta ka geysatey in aaska Shiikh Maxamed Macalim Xasan uu u dhaco si qushuuc badan oo habeysan.
Shiikh Maxamed Macalim Xasan waxaa dabadeed lagu aasey Afaafka hore ee masjidka AL-HUDAA oo dadku u yaqaano Masjidka Tabliiq.
Aaska ka hor ayaa waxaa ku dukadey janaasada dad kumanaan gaaraya oo buux dhaafey masjidka oo ahaa mid aad u weyn, lehna barxad aad u weyn oo baabuurta la dhigto.
Aaska Shiikha ka dib waxaa la guda galey in culimada waaweyn ee Soomaalidu ay ka hadlaan wixii ay ka yaqaaneen Shiikha.
Waxaana hadalkaas ereyo ka soo kala jeediyey culimo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cali Sheekh Maxamuud “Sheekh Cali Dheere”, Sheekh Maxamed Axmed “Sheekh Abba”, Sheekh Nuur Baaruud, Sheekh Ibraahim Maxamed Cali, Sheekh Nuur Macalim, Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf, Sheekh Yuusuf Cali Ceynta, Sheekh Siciid Yaxye Xaaji, oo dhamaantood ku tilmaamey Sheekh Maxamed Macalim Xasan in uu ahaa aabihii baraaruga Islaam doonka Soomaaliyeed.
Culimadaas qaarkood waxaa ka mid ahaa Sheekh Yuusuf Cali Ceynte oo sheegey in 32 sano uu Sheekh Maxamed Macalim Xasan u ahaa Macalim, qaab ka duwan qaabkii hore ee safsiirka quraanka kariimka ayuu noogu tafsiiri jirey, waana la yaabi jirney, aad ayaana u jecleyn ayuu yiri, waxaana ay ugu duceeyeen culimadu Sheekha in uu noqdo kii janada ku gad-gadoomo, ayagoo ALLAAH uga baryayey in uu naxriistiisa siiyo.
Buracad Badeed Soomaali Ah Oo Gacanta Ku Dhigeen Markad Shidaal Sida
Kooxaha burcad badeeda Soomaaliyeed ee wax ka afduubta biyaha Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay markab nooca shidaalka qaada ah oo laga leeyahay dalka Kuwait hase ahaatee ku safrayay calanka dalka Singapore.
Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa ku waramaysa in koox ka tirsan burcad badeeda Soomaaliyeed ay rasaas iyo bambaanooyin ku rideen markabka ka hor inta aysan qabsan waxaana la sheegay inay ugu dambeyn dusha ka fuuleen markabka oo ay xukunkiisa la wareegeen isla markaana ay ula soo dhaqaaqeen dhinaca xeebaha Soomaaliya.
Markabkaan oo la yiraahdo MV ZIRKU oo ay saaran yihiin 29 shaqaale ah ayaa waxaa la sheegay inuu ka tagay dalka Sudan oo uu shidaal geeyay waxaana laga qafaashay meel u dhaw gacanka Cadan ee dalka Yemen.
Ciidamada Midawga Yurub ee ku sugan biyaha Soomaaliya ayaa sheegay I shaqaalaha saaran markabka ay u kala dhasheen dhawr wadan oo Carab u badan iyadoo laga cabsi qabo in shaqaalaha ay waxyeelo kasoo gaartay rasaastii ay burcad badeedu furtay.
Duqeyn Qasaaro Dhamasho Iyo Dhaawac Geysatey Oo Xaley Mogdisho Ka Dhacdey.
Madaafiic iyo raasaas ayaa xalay laga maqlayey xaafadaha Waqooyi ee Magaalada Muqdisho halkaasi oo ay isku horfadhiyaan Ciidamada Dowlada KMG Soomaaliya iyo kuwa Al-shabaab.
Dagaalka oo ay weerarkiisu qaadeen Ciidamda Dowlada KMG Soomaaliya ayaa waxaa uu xoogiisu uu ka dhacay Degmada Boondheere halkaasi oo dadkii degnaana ay iska barakaceen Ka dib markii ay xoogeysteen Xiisadaha Halkaasi ka jira.
Inta la ogyahay 5-ruux ayaa ku geeriyootay 7-kalana waa ay ku dhaawacmeen oo dagaalka kuwaas oo u badan dhinacayadii dagaalamayey.
Xaafadaha ka tirsan DegmooyinkaCabdicasii Shibis iyo boondheere ayaa waxaa isku horfadhiya dhinacyada xarig jiidka uu ka dhaxeeyo ee ciidamada dowlada KMG Soomaaliya iyo kuwa xarakada al-shabab taasi oo suurta gal markasta ka dhigi karta inay dagaalamaan.
Dagaalkii Shalay ka dhcay degmada boondhere ayaa waxaa ku geeriyooday 15-ruux halka 20-kalana ay ku dhaawacmeen waxaana marka la isku geeyo dhimashada labada maalin ay ka dhigso 20-dhimasha iyo dhaawac gaaraya 27-ruux oo dhamaantooda u badan dhinacayadii dagaalamyey.
Xaalada deeganada lagu dagaalamay ayaa hada laga dareemayaa deganaansho aan caga badan ku taagneyn waxaaana laga maqlayaa degmada boondheere rasaas teel-teel ah oo ay ay isweydaarasanyaan labada dhinac ee dagaalamay.
Shabaab Oo Sheegtey In Xukuumada Ku Fashilantey Boqolkii Maalmood.
Afhayeenka Ciidamada Shabaab Sheekh cabdi Casiis Abuu Muscab oo la hadlaayay qaar ka mid ah Warbaahinta Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in Dowlada KMG Soomaaliya ay ku fashalintay Boqolkii maalin ay qabsatay.
Abuu musacb ayaa sheegay in boqolkii ay qabsatay Xukuumada ay noqotay mid ay ku fashilintey waxaana inta ku daray in dagaaladii u danbeeyay ee ka dhacay Muqdisho ay ku jabeen sida uu sheegay Ciidamada Dowlada iyo Kuwa AMISOM.
Afhayeenka Ciidamada shabaab abuu muscab ayaa ka codsaday Shacabka Soomaaliyeed in ay ka gacan siiyaan dagaalada Shabaab ay kula jiraan Dowlada iyo AMISOM sida uu hadlka u dhigay.
Inkastoo Shabaabku ay sheegeen in Boqolkii maalin xukuumada ay qabtsatay ay ku fashilmeen ayaa hadana Saraakiil ka tirsan Dowlada oo la hadlaayay Warbaahinta ayaa iyaga horey u sheegay in Boqolkii maalin ay wax badan ka qabteen isla markaana ay la wareegeen Saldhigyo muhiim u ahaa oo shabaab ku suganaan jirey kuwaaasi oo ku yaalay Magalada Muqdisho.
Dhinaca kale Afhayeenka xarakada Shabaab ayaa waxaa uu guulo ka sheegtey Dagaal ka dhacay duleedka Balad-weyne ee Gobalka Hiiraan gaar ahaan deegaanka ilka Cade oo hoostaga Ceel-gaal.
Waxaana uu sheegay in dagalkaasi lagu soo qaaday isla markaana ay iska cabiyeen Ciidamadii Dowlada ee weerarka ku soo qaaday waxaana uu intaa ku daray in qasaare xoogan ay gaarsiiyeen Ciidamada Dowlada.
Dagaaladii ugu danbeeyay ee ka dhacay Magaalada Muqdisho ayaa qasaaraha ugu badan waxaa uu ka soo gaaray dadka rayidka ah iyadoo saraakiisha dowlada iyo kuwa shabaab aysan waxba iska weydiin dhimashada ,dhaawac iyo Barakaca joogtada ah ay sameynayaan dadkaasi.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Maarso, 2011.